Snapchat dia mandefa ny fikarohana iraisana takiana mba tsy handehanantsika amin'ny fifaninanana | Vaovao IPhone
Snapchat dia mandefa ny fikarohana ankapobeny takiana mba tsy handehanantsika amin'ny fifaninanana
Niova be ny tontolon'ny media sosialy tato ho ato, Sahiko ny milaza fa tamin'ny herintaona, ary tsy zavatra maharitra ela ity, fa zava-baovao. Betsaka aminareo no hahatadidy ny lazan'ny Snapchat hatramin'ny nahatonga ny hafa nanako ny paikadiny ary nanapa-kevitra ny hampiditra ny zavatra nataon'i Snapchat tamina fampiharana azy ireo. Teraka toy izany Instagram Stories ohatra, ilay mpifaninana mazava amin'ny Snapchat.
Snapchat dia te-hanohy amin'ny hazakazaka ny zavatra natombok'izy ireo, mizara tantara kely. Ka, Vao nanambara i Snapchat fa mitondra fanitsiana nohavaozina ho an'ny fampiharana iOS sy Android.. Toa tsy te hilavo lefona amin'ny Instagram Stories izy ireo ... Aorian'ny fitsambikinana dia omenay anao ny pitsopitsony rehetra.
Izany dia asa mihoatra ny tinady satria ny motera fikarohana izay navelan'i Snapchat be dia be dia be. Ity motera fikarohana vaovao ity dia natao ao an-tsaina ao anaty hafainganana, amin'ny hafainganam-pandehanay manao fikarohana. Hizaha bara fikarohana vaovao eo an-tampon'ny interface camera (ao anatin'ny Snapchat) isika izao. Avy any hanan-tsafidy isika hanomboka resaka amin'ny mpifanerasera matetika sy vondrona misy antsika matetika, Ver vaovao Amigos, hametraka namana vaovao, ary karohy ny atiny tadiavinay. Ny fikarohana namana vaovao, sy ireo efa misy, dia azo atao amin'ny anarana sy ny solonanarana.
Ankoatr'izay, iray amin'ireo vaovao farany, Ny tantarantsika, nanjary manerantany. ny orinasa izy ireo koa mety ampiasao ity fiasa vaovao ity ary safidio ireo mpampiasa mizara fotoana ny tantarany, ary iza no afaka mandray anjara amin'izany. Inona ny vaovao azonao jerena ao amin'ny Snapchat anao amin'ny andro ho avy, Vao natolotra fa tsy mahagaga raha tsy ela akory ianao vao mampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Snapchat dia mandefa ny fikarohana ankapobeny takiana mba tsy handehanantsika amin'ny fifaninanana
Ny iPad Pro 10,5 "dia ho toy ny iPad Mini roa napetraka mifanila
Ny iPhone tany am-boalohany dia tsy azo namboarina intsony